Fanaovam-baksiny hoe… ? : tonga amin’ny fitsaram-bahoaka ny savorovoro momba ny pesta | NewsMada
Fanaovam-baksiny hoe… ? : tonga amin’ny fitsaram-bahoaka ny savorovoro momba ny pesta
Nahatonga savorovoro niafara amin’ny fitsaram-bahoaka ny feo niely tao Toamasina hatry ny alarobia teo, ny amin’ny hoe fisiana andian’olona mitety tanàna manao vaksiny hiadiana amin’ny pesta. Manohitra izany ny olona ka tratran’ny fitsaram-bahoaka hatramin’ny mpanao fanisam-bahoaka.
Tsaho iniana aely sa tsy mazava amin’ny olona intsony ny momba ity resaka pesta ity? Raikitra indray ny savorovoro niafara tamin’ny fanaovana fitsaram-bahoaka tao Toamasina hatramin’ny alarobia tolakandro teo. Raha ny zava-niseho tany an-toerana niely ny feo fa hoe misy olona hanao vaksiny hiadiana amin’ny pesta mitety tokantrano, afakomaly. Nanakaton-trano sy vavahady daholo ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny manan-janaka mbola kely. Tsy nijanona teo anefa izany fa mbola nitohy, omaly indray ity resaka fanaovana vaksiny hiadiana amin’ny pesta isaky ny fokontany ity. Efa nifampiandriandry isaky ny fokontany ny fokonolona ka tapa-kevitra fa hodarohana avy hatrany izay tratra manao izany vaksiny izany fa tsy ara-dalàna. Tao amin’ny fokontany Ambalakisoa nitohy tao Mangarivotra Toamasina, nisy olona niharan’ny fitsaram-bahoaka izay voalaza fa mpanao vaksinina pesta.
Hafa kely anefa ny zava-nitranga tao amin’ny fokontany Andranomadio fa ireo tanora mpilatsaka an-tsitra-po mitety trano isam-pokontany manao fanentanana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina pesta no saika niharan’ny fitsaram-bahoaka satria noheverin’ireo mponina fa ireo mpanao vaksiny hiadiana amin’ny pesta.
Tao amin’ny fokontany Depot fahefatra, zazavavikely iray safotra noho ny fanaovan’olon-tsy fantatra azy vaksiny teo amin’ny tanany. Olona roa no voalaza fa nanao an-keriny nanao vaksiny ilay ankizivavikely.
Niharan’ny fitsaram-bahoaka hatramin’ny mpanao fanisam-bahoaka…
Nifanindran-dalana tamin’ity raharaha nampisavorovo ny saim-bahoaka ity koa ny fahatongavan’ireo olona roa misahana ny fanisana ankapobeny ny mponina sy ny toeram-ponenana isam-pokontany tao Toamasina. Niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany ireto olona mpanao fanisam-bahoaka ireto satria noheverin’ireo fokonolona fa olona hanao vaksiny. Vokany, naratra mafy ireo niharam-boina. Tonga teny an-toerana nanavotra ny ain’izy ireo ny polisy. Fotoana fohy taorian’izay tonga teny an-toerana koa ny tompon’andraiki-panjakana notarihin’ny prefet-n’i Toamasina, Benandrasana Cyril sy ny depioten’i Toamasina, Famindra Justin izay nanaraka akaiky ity raharaha nanahirana ity.
Nandray fepetra ireo tompon’andraiki-panjakana ao Toamasina ka naato vonjy maika aloha ny fanisam-bahoaka manoloana ity raharaha mampifanjevo ny mponina ity.
Taratry ny fahalemen’ny fitondram-panjakana ny toy izao satria lasa mahazo vahana ny tsaho na efa tena mby an-koditra aza ny valanaretina pesta. Tsy mazava amin’ny olona intsony ny lalan-kizorany hany ka miafara amin’ny fitsaram-bahoaka izany satria tsy matoky na iza na iza intsony ny olona. Mijanona ho tsaho sy honohono sisa ny resaka. Mitovy tamin’ny fanaovana vaksiny polio koa ity raharaha ity satria maro tamin’ireo ray aman-dreny no tsy nanaiky ny hanaovana vaksiny ny zanany.
Mangataka koa ny mponina ao Toamasina mba ny zanak’i Toamasina mahasolo tena isam-pokontany no tokony hampanaovina ity asa fanisam-bahoaka ity fa tsy olona ivelan’ny faritra izay tsy mahafantatra akory ny momba ny mponina ao Toamasina.
“Tokony tsy hisahotaka ny vahoaka fa tsaho avokoa izany”, hoy ny minisitra
Momba ny tranga any Toamasina, nilaza ny minisitry ny Fahasalamana omaly teny Ambohidahy fa tsaho naely fotsiny izany fa tsy mitombona mihitsy. Nisy ny fanadihadiana nataon’ny tomponandraikitra teny ifotony amin’ny fokontany voatonona fa nisehoan’ny tranga. Entanina ny mponina tsy hisahotaka amin’ny tranga tahaka ireny satria mampikorontana fotsiny. Tsy mbola misy velively ny vaksiny isorohana ny pesta hatramin’izao. Tokony hiantso hatrany ny 910 iro rehetra mila torohevitra raha misy ny fanahiana.